प्रणय दिवसकाे शुभकामना !
म अनि म एउटा तिमी राम्रो म, अर्को फुस्रो अनि चाम्रो म।
तिम्रो म र मेरो म लाई घोलेर एउटा घुलित म.म रुपि पदार्थ बनाउला,, जैविक तत्व मात्र लौ नसम्झ रासायनिक अचार मोलेर तिम्रो म र मेरो म लाई मसलारुपि म.म बनाउला।
म.म का ती डल्लाहरु जस्तै तिम्रा मेरा हल्लाहरु सल्ला सुसाए जस्तै सुसाउदै छन अरे है ? यसैगरी हर पल तिम्रो सामीप्यतामा फुसफुसाउन पाउने हो हैन खै?
तिम्रो म सामु मेरो म को जिद्दीपना तिमी बुझिदेउ,, यो मेरो बर्खे झरी झै दर्किरहेको प्रेममा मेरि म.म मज्जाले रुझिदेउ।
तिम्रो म र मेरो म बाट बनेको यो महल महाभुकम्पले पनि त; चर्काउन सकेन। तिमी गयौ जस्तै लागेरै हो। बाटो खोजेको यो पापी भाग्य तिमिलाइ नफर्काउन किन सकेन ।
आज भोलि त सानो सानो यात्रामा तिम्रो साथ पाउँदा तिमिमै हराउछु। ए राम्रो म थाहा छ ? त्यो दुनियाँ हल्लाएको भुकम्प अघि बाटै म तिमिलाइ कत्ति मन पराउछु।
यस्तै हो त प्रेम मेरि म ? तिम्रा ती सम्झनाहरु त जुनि जुनि छुट्दैनन। तर तिम्रो जिबनरुपि यात्रामा कतै मेरो म छुट्ने होकि; भन्दै डराउछु। ए मेरि राम्री म तिम्रो यादले मेरो म को सपनाहरूमा कत्ति कराउछु।
मेरो म को प्रेम तिम्रा लागि चटपटे र पानीपुरीमा घुलित भिनेगार जस्तै प्रिय बनाउनु छ। तिम्रो पानीपुरी प्रेम कति मीठो है ? मेरो म लाई पनि भिनेगाररुपि ब्याक्टेरिया थपेर तिम्रो म सङ रासायनिक प्रतिक्रिया गराउनु छ।
तिम्रो म भुगर्भबिद बनेर सुख्खा चट्टानमा हराउदै गर्दा,, तिम्रो कोमल औलाहरुले खनिज चलाउदै गर्दा , म आउने छु। जीव विशेषज्ञ बन्दै, सुख्खा चट्टानहरु भित्र जैविक जीवन गन्दै, म आउने छु,, मेरि म तिमी म.म खोल बने म तिमि भित्र जडित किमा हु भन्दै।
तिम्रो म र मेरो म कत्ति सुहाउँदो देखिएको । स्वादिलो भएर नै होला है ? तिमी र म जस्तै किमा र मैदा मिसिएर बनेको बस्तुलाइ म.म लेखिएको। जे जस्तो हुँदै गरोस् यो दुनियाँलाई सुनाउनु छ। तिम्रो म र मेरो म लाई मिसाएर जिबन्तरुपी स्वादिलो म.म बनाउनु छ।